केराउको आयात तीन गुणाले बढ्दै, तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारत किन लगिँदैछ केराउ ? | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर केराउको आयात तीन गुणाले बढ्दै, तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारत किन लगिँदैछ केराउ ?
on: May 20, 2019 मुख्य खबर, समाचार
केराउसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरी ।
भारतमा केराउ आयातमा ५४ प्रतिशत शुल्क
भारत सरकारले आफ्ना कृषकलाई संरक्षणका लागि केराउको आयातमा उच्च दरको आयात शुल्क लगाएको छ । भारतमा यस्तो शुल्क ५४ प्रतिशत छ । भारतमा यो वर्ष केराउको उत्पादन बढे पनि मूल्य बढेको छैन । उत्पादन परिमाणको आधारमा भारत चौंथो ठूलो उत्पादक हो । क्यानडा, रुस, र चीन भारतभन्दा अग्रस्थानमा छन् । यी देशमा उत्पादन बढेपछि भाउ सस्तो भएको छ । आयातित सस्तो केराउका कारण आफ्ना कृषकको उत्पादनले बजार नपाउने देखेपछि भारतले आयातमा उच्च दरको शुल्क लगाएको हो । केही अघिसम्म आयातमा रोक नै लगाएको थियो ।
केराउ आयात ३ गुणा बढ्छ
वीरगञ्जबाट तस्करी बढेसँगै केराउको आयात ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामा १ लाख ३० हजार ५४६ मेट्रिकटन केराउ आयात भइसकेको छ । यो परिमाण गत वर्ष ५० हजार ११४ मेट्रिकटन रहेको बन्दरगाह भन्सारका सूचना अधिकृत विकासकुमार साहले बताए । यो वर्ष केराउ आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ गुणाभन्दा बढी हुने अनुमान भन्सारको छ ।
स्थानीय प्रहरीसँगको सेटिङमा अवैध धन्दा
वीरगञ्जका केही ठूला व्यावसायिक घरानाले स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग सेटिङ मिलाएर यो अवैध धन्दा चलाइरहेको स्रोतले बताएको छ । सुक्खा बन्दरगाह नाकाबाट आयात भएको केराउमध्ये धेरैजसो वीरगञ्जका व्यापारीको रहेको भन्सारले बताएको छ ।
The sane case in Bhairahawa,gallamandi